UMdali we-GIF yoMenzi wevidiyo, simahla kangangexesha elimiselweyo | Ndisuka mac
UMdali we-GIF yoMenzi wevidiyo, simahla kangangexesha elimiselweyo
Siyaqhubeka nezinye zezona zicelo zinomdla wokudala ii-GIFs kwaye ngaphezulu kwako konke sijonga ezo zithengiswayo okanye zasimahla kangangexesha elilinganiselweyo ukuqala ukwenza ezethu ii-GIFs. Kule meko sisicelo esingelilo igqala ukusukela oko yasungulwa ngo-Epreli odlulileyo, UMyili weGIF weVidiyo Kwaye ngoku emva kohlaziyo oluncinci sinokulufumana simahla okwexeshana kwiVenkile ye-Mac App. Ngeli thuba, njengazo zonke ezi zinto zonyuselo, asazi ukuba ingahlala ixesha elingakanani mahala, ke musa ukulibazisa ukhuphelo kakhulu ukuba unomdla kulo.
Ngomenzi weVidiyo ye-GIF sinenkululeko yokungenamda xa usenza imifanekiso ye-GIF kwaye esi sicelo senziwe ngokukodwa ukuguqula iividiyo kunye nemifanekiso esinayo kwi-Mac yethu kwii-GIF zoopopayi. Kukho iindlela ezizezinye kwesi sicelo kodwa ngayo unokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abaqhelekileyo kunye nabaqulunqi bendalo yabo ukusukela oko inezixhobo ezaneleyo ukuze ukwazi ukusebenza ngokugqibeleleyo.
Ilula kwaye inonxibelelwano olusebenzayo apho izixhobo ziyimfuneko yindlela esenziwa ngayo esi sicelo sokwenza ii-GIF zoopopayi. Ikwaxhasa isandla esifanelekileyo somfanekiso kunye neefomathi zevidiyo, imifanekiso iyaxhaswa: iJPG, JPEG, PNG, TIFF, TIF, GIF, BMP, kunye neefomathi zevidiyo ziyaxhaswa: MOV, M4V, MP4, 3GP, 3G2. Ngaphandle kwamathandabuzo, nabani na unokwenza i-GIF ye-animated kwaye ngolu hlobo lwesicelo kulula kakhulu.
Umenzi wevidiyo we-GIF-uMenzi we-GIF€ 4,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » UMdali we-GIF yoMenzi wevidiyo, simahla kangangexesha elimiselweyo